Mwana akagara amai vake nhaka :: Harare24 News
Mwana akagara amai vake nhaka
Published: 25 August 2013 (202783 Views)
MURUME wechidiki wemumusha waMuzunza, kwaKatsukunya mudunhu reMutoko akagara nhaka amai vake baba vari vapenyu – vaviri ava ndokutosvika pakuita mwana vose uye ari kuti baba vake ndivo vakamukurudzira kuita chipini ichi mushure mekunge vamuti "havachabaka moto".
Zvikomborero Tome (35) naamainini vake, Joyce Katiyo (39), vakatomiswa mudare redzimhosva reMutoko Magistrate Court, vose vakapihwa chirango chekushanda vachibva kumba uye pasina muripo nekuda kwemakunakuna aya.
Mudare iri, vaviri ava vakabvuma mhosva yekuti vanodanana zvisinei kuti havana kudura kuti vakatoita mwana vose izvo vakazoudza kuKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.
Vose vakapihwa mutongo wavo nemusi wa26 Chikunguru.
Kwayedza yakashanyira vaviri ava kumba kwavo uko vave kugara vose mushure mekushaika kwababa vepamusha apa munaChikumi gore rino.
Zvikomborero naJoyce vakataura kuti vange vave nemakore maviri vachidanana kusvika panguva yakazoshaika baba vepamusha apa.
Vakazosungwa apo mapurisa akanyeverwa neveruzhinji, ndokuzoendeswa kudare.
Zvikomborero naJoyce vakasvikirwa nevatori venhau kuma6 zuva rodoka vachibva kuchikoro cheKatsukunya nekukiriniki yeKatsukunya uko vari kushanda sechirango chemutongo wavakatemerwa nedare chekushanda maawa 210 pamunhu woga-woga.
Joyce ari kushanda ari kukiriniki uyuwo Zvikomborero achishandira kuchikoro. Joyce anga ari mudzimai wababa vaZvikomborero, VaBenny Muzunza, avo vakashaika vave nemakore anodarika 80 okuzvarwa.
Mudzimai waZvikomborero anonzi akatotiza pamusha nekuda kwerudo rwaZvikomborero namainini vake Joyce.
Vaviri ava pavakataurwa navo havana kumbondandama panyaya yavo - vakati vaitosiya mushakabvu (baba vaZvikomborero) achirara oga mumba ivo vachinorara mubhedhuru remwanakomana uyu.
Zvikomborero nemudzimai wake wekuzomutiza vane vana vaviri uyewo Joyce ane vana vaviri - avo vaanoti mumwe ndewemurume wake wekushaya newaZvikomborero. Mwana wemakunakuna uyu ndiye ava nemakore matatu okuberekwa.
Zvikomborero akaudza Kwayedza kuti akaita makore maviri achidanana naamainini ava apo baba vake vainge vachiri vapenyu.
"Taidanana naamainini mukadzi wababa ivo baba vari vapenyu. Ivo baba ndivo vakatishevedza pamwe chete naamainini ndokunditaurira kuti vakanga vasisina simba repabonde, ndokuti ndipinde kuna amai kuti vasazopoya mumba.
Vakataurirawo amai ava, tose tikabvumirana," akadaro Zvikomborero.
Murume uyu anoti akamboedza kuramba zano rababa vake iri kusvikira akazongobvuma uye anoti vakanga vave kudanana zvikuru kusvika pakazoshaika baba vake.
Amai vaZvikomborero vekumubereka – Muchaneta Mvundura – vakashaika mugore ra1997 baba vake ndokuzoroora Joyce muna2005.
Zvikomborero akaberekwa achingova oga mukomana pavana vatatu.
"Ndaiva ndakaroora Ritta Chimuzinga uyo akazoenda kumba kwavo kuNyamuzizi asi ndakaita naye vana vaviri. Haana kuenda nekuda kwekudanana kwangu naamai, akaenda nekurwara," akadaro Zvikomborero. Joyce akabvumawo kuti vaidanana zvikuru nemwana uyu kusvikira mukufa kwemurume wake.
"Baba vake vaiva murume wangu chaiye zvisinei kuti vakanga vakura. Vakanga vasisagone, ini zvaindinetsawo semunhu mudiki. Ivo vaindityira ini semukadzi mudiki.
"Vakatitaurira kuti tidanane pane kuti ndiende kunze nekudaro ndaivasiya ndichienda kunorara naZvikomborero usiku hwose kusvikira pakuzofa kwavo," akadaro Joyce.
"Musikana mudiki uyu mwana waZvikomborero asi birth certificate rake akatoreswa nababa vasati vafa," akadaro Joyce.
Vaviri ava vobvunzwa kuti vaisanzwa kutya kana netsitsi here apo vaisiya baba vaZvikomborero mumba varere voga vachirwara ivo vachinosasana, vakati vakanga vasina zvekuita.
Baba vepamusha apa vakazonoshaikira kumusha kwakaroorwa mumwe mwanasikana wavo kuChiweshe uko vakanga vanorapwa ndokuzonovigwa kwaMutoko.
Sahwira mukuru wemhuri iyi, anovawo mupurisa munzvimbo iyi, Fungai Chawora, akati Zvikomborero naamai vake Joyce vakatanga kudanana kare - makore anogona kusvika mana kana mashanu.
"Ini ndakauya pano kasingapere apo Benny akauya kwandiri achiti airwadziwa nezvaiitwa naZvikomborero zvekudanana naamai vake. Akanditi nditaure navo asi havana kundinzwa, izvo zvekuti vakadanana kwemakore maviri chete kunyepa," akadaro Chawora.
Joyce naZvikomborero vakabvuma kuti sahwira wavo uyu zvechokwadi aivatsiura nenyaya yechipini chavaiita.
Zvakadai, vaviri ava vanoti dare rakavati varege zvekudanana zvachose, uyu Zvikomborero otama pamusha apa, onovaka kwake oga kuitira kuti vasazonzwirana shuga.
Vose vakaramba nyaya yekuti vanogona kudzokerana vachiti vanotya kutyora mutemo.
"Ini handichazviita zvakare, ava ndimai vangu, ndave kutotsvagawo musikana wekuroora achava muroora waamai ava," akadaro Zvikomborero.
"Handizvipamhidze futi, ndave kumutora semwana wangu, kana ndanzwawo shungu dzekuda ndinongoshivirira, takanzi tingogara," akadaro Joyce. Zvachakadai, guva rababa vaZvikomborero rinoda kurohwa zvichada kuti mudzimai uyu aripe murume wake akafa iyewo Zvikomborero achiripa kutadzira baba vake.
"Kuripa baba vangu ndinoda asi handina mombe kana mbudzi zvayo, zvimwe chete naamai hapana zvavainazvo. Hamheno kuti ticharipa nei," akadaro.
Mukadzi uyu anoti haachada kuroorwa zvekare uye ave kugarira kuchengeta vana vake pamwe chete nevaZvikomborero. Munin'ina wababa vaZvikomborero, VaJameson Tome, havana kuonekwa kuti vataure nekuda kwenyaya iyi.
Pachivanhu, ndivo vangadai vakatenderwa kugara nhaka kumukadzi wemukoma uyu. Kwayedza haina kukwanisa kuona Ishe Mutoko kuti vapewo mafungiro avo pamakunakuna aya.
Sabhuku vemusha uyu, VaRichard Tome, vanonzi vakambotonga nyaya iyi vakaitadza sezvo vaviri ava vairamba vachipengesana murudo.